कतै तपाईले नक्कली अण्डा त किन्नु भएन??अण्डा असली वा नक्कली छुट्याउने ५ तरीका(जान्नैपर्ने) – PathivaraOnline
Home > समाचार > कतै तपाईले नक्कली अण्डा त किन्नु भएन??अण्डा असली वा नक्कली छुट्याउने ५ तरीका(जान्नैपर्ने)
जाडो मौसम होस् या गर्मि मौसम, अण्डा खानु स्वास्थ्यको लागी फाइदाजनक हुन्छ। अण्डाको माग बढेका कारणले केही दिनमा अण्डाको मुल्यमा वृद्धि भएको समाचार आएको थियो। मुल्यमा वृद्धि भएसँगै बजारमा नक्कली अण्डाहरूको बिक्री हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा, प्रश्न उठ्छ कि कहीं तपाई धेरै प्रोटीन सेवन गर्ने क्रममा नक्कली अण्डाहरुको सेवन त गरीराख्नु भएको छैन? केही समय पहिले,नक्कली अण्डा बेचेर कलकताबाट प्रहरीले एक पसललाई पक्राउ गरेको थियो।
यस्तो अवस्थामा, तपाईलाई यो कुरा जान्न आवश्यक छ नक्कली र असली अन्डा बीचको फरक के छ? तपाईले असली र नक्कली अण्डाहरू बीचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईसँग यसको जानकारी छ भने तपाईले बजारमा धोका खानाबाट जोगिन सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईले एक पसलबाट हुने नक्कली अण्डा बिक्रीको बारेमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई पनि नक्कली अण्डाबाट शरीरमा हुने असरबाट जोगिन सक्नुहुन्छ।
नक्कली अन्डाले तपाईको शरीरलाई फाइदाको साटो क्षति पुर्याउँछ। आज हामी तपाईलाई केहि कुरा बताउँदैछौ जसको माध्यमबाट तपाई आरामपूर्वक नक्कली र असली अण्डा पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। यी पाच भिन्नताको बारेमा पढ्नुहोस् जसको माध्यमबाट तपाई असली र नक्कली अण्डा पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाई आगोमा नक्कली अण्डाको बोक्रा आगोमा हाल्नु हुन्छ भने यो चाँडै बल्छ । किनकि यो प्लास्टिक जस्तै चिजबाट बनाइएको हुन्छ। यदि तपाइँ आगोलाई असली अण्डाको गोललाई आगोमा हाल्नुहुन्छ भने यो बल्दैन। जब यो आगोमा हालिन्छ केहि समयमा पछी यो कालो हुन्छ र प्लास्टिकको जस्तो गन्ध पनि आउदैन।
अन्डा चम्किलो हुदैन
असली अन्डाको पहिलो पहिचान भनेको,यो अन्डा खासै चम्किलो हुदैन। झटक्क हेर्दा यो धमिलो जस्तो देखिन्छ भने नक्कली अण्डाको खोल धेरै चमकदार हुन्छ । नक्कली अण्डाको रङले तपाईलाई असली अण्डाको रंग भन्दा बढी आकर्षित गर्नसक्छ।
असली अन्डालाई छुँदा नरम महसुस हुन्छ । जबकि असली अन्डाको तुलनामा नक्कली अन्डा खस्रो हुनेछ। यस अवस्थामा, तपाईले सोच्न सक्नुहुन्न कि असली अण्डाको सतहहरू नराम्रो हुनुपर्छ।
यी दुवै आवाजहरू असली र नक्कली अण्डाहरू पहिचान गर्न महत्वपुर्ण छन्। जब तपाई आफ्नो हातमा वास्तविक अण्डा लिएर यसलाई हल्लाउनु हुन्छ, यसले कुनै पनि आवाज निकाल्दैन । अर्कोतर्फ, यदि तपाई नक्कली अण्डा हल्लाउनु हुन्छ भने, तपाईले नक्कली अण्डा भित्र केहि हल्लेको आवाज पाउनुहुनेछ।
जब तपाई वास्तविक अण्डा खोल्नुहुन्छ, तपाई अंडाको भित्रको पहेलो भाग छुट्टै देख्नुहुनेछ। अर्कोतिर यदि तपाईंले नक्कली अण्डालाई खोल्नुहुन्छ भने, तपाईले नानीलाई सेतो तरल पदार्थसँगै मिलेको देख्नुहुनेछ । यसबाट तपाइँले वास्तविक र नक्कली अण्डा पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ।
भर्खरै पोखराबाट आयो रहस्यमय घटनाको खबर – पुरा हेरी सक्दो शेयर गर्नुहोस
आज बङ्गलादेशबाट उद्दार गरि नेपालीहरू ल्याइने, भाडा दर घट्याे!
चकलेटी नायक आर्यन सिग्देल बने बाबु